Boriborintany IV: natoby ao amin’ny FJKM ireo traboina | NewsMada
Boriborintany IV: natoby ao amin’ny FJKM ireo traboina
Noho ny fahamaizan’ny trano teny Anosibe Andrefana Faharoa ny zoma alina teo, tonga teny an-toerana ny delegen’ny boriborintany fahefatra, Ramahandrimanana Solofoniaina Daniel, sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy ary ny tale misahana ny asa sosialy eo anivon’ny kaominin’Antananarivo Renivohitra, ny Dr Andriantseheno Onimiandra Helitompo Prisca, nijery ny zava-nisy teny an-toerana.
Raha ny tatitra, miisa 274 ny traboina ary rava ny tokantrano miisa 65. Nisy trano hazo 24 sy trano biriky valo kila. Nisy olona iray may sy naratra, ary olona iray namoy ny ainy izay marihina fa vehivavy tsy salama saina.
Noraisin’ny delegen’ny boriborintany fahefatra sy ny tale misahana ny asa sosialy ny fifampiraharahana tamin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny fiangonana FJKM Ziona Fahazavana ka nahazoana alàlana nametrahana ireo traboina ireo ao amin’ny fiangonana. Araka izany, olona 200 no nanaiky nihazo ny toerana hitobian’izy ireo.
Noraisin’ny boribornitany ihany koa ny fanampiana amin’ny sakafo toy ny vary sy voamaina ho an’ny traboina, nanomboka tamin’ny zoma hariva teo, nandefa mpitsabo ihany koa ny avy ao amin’ny DSH ao amin’ny CUA hizaha ny fahasalaman’izy ireo.